1 Tantara 11 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 11
Ny nanosorana an'i Davida ho mpanjaka tany Hebrona - Ny nahazoana an'i Jerosalema - Ny lehilahy maherin'i Davida.
1Ary nivory teo amin'i Davida tany Hebrona Israely rehetra nanao hoe: Indro fa taolanao sy nofonao izahay. 2Taloha fony mbola nanjaka aza Saola, dia efa nitondra an'Israely nivoaka sy niditra hianao. Ary hoy Iaveh Andriamanitrao taminao: Hianao no ho mpiandry an'Israely vahoakako, ary hianao no ho mpanapaka an'Israely vahoakako. 3Dia tonga teo amin'ny mpanjaka, tany Hebrona, ny loholon'Israely rehetra, ary Davida nanao fanekena tamin'izy ireo, teo anatrehan'ny Tompo, tany Hebrona, ary izy ireo nanosotra an'i Davida ho mpanjakan'Israely, araka ny tenin'ny Tompo, notononin'i Samoela.
4Dia nandeha Davida mbamin'Israely rehetra hamely an'i Jerosalema, izany hoe Jebosa; tao ny Jeboseana mponina tamin'ny tany. 5Fa hoy ny mponina tao Jebosa tamin'i Davida: Tsy ho tafiditra eto hianao. Afak'i Davida ihany anefa ny trano mimandan'i Siona: izany no tanànan'i Davida. 6Ary hoy Davida: Na iza na iza handresy voalohany ny Jeboseana dia izy no ho lehibe sy filohany. Ary Joaba zanak'i Sarvia no niakatra voalohany, ka izy no tonga lehibe. 7Dia nitoetra tao anatin'ny trano mimanda Davida, ka izany no niantsoana azy hoe: tanànan'i Davida. 8Nanorina ny tanàna tamin'ny manodidina hatrany Melao sy ny eny akaiky eny izy, ary Joaba namboatra ny sisa tamin'ny tanàna. 9Koa nandroso nihalehibe ihany Davida, ary nomban'ny Tompon'ny tafika izy.
10Ireto no lehiben'ny lehilahy mahery izay tao amin'i Davida, ka nanampy azy niaraka tamin'Israely rehetra nandritra ny andro nanjakany, sady efa nampanjaka azy izy araka ny tenin'ny Tompo ny amin'Israely. 11Dia izao no isan'ny lehilahy mahery tao amin'i Davida: Jesboama, zanak'i Hakamonì, lehiben'ny Telo-polo lahy: Izy no nampandihy ny lefony tamin'ny olona telon-jato lahy, izay novonoiny tamin'ny indray mandeha monja. 12Ny manarakaraka azy dia Eleazara, zanak'i Dodao, Ahohita; anisan'izy telo lahy mahery izy. 13Izy no nomba an'i Davida tany Fesa-Domima, ary nivory teo ny Filistina mba hiady; nisy toerana anankiray feno orja teo, ary vaky nandositra teo anoloan'ny Filistina ny vahoaka. 14Lasa nankeo afovoan'ny saha izy ireo, niaro azy sy nandresy ny Filistina, dia nanao famonjena lehibe Iaveh.
15Nisy telo lahy tamin'ireo kapiteny telopolo lahy nidina nankany amin'i Davida teo amin'ny vatolampy, tany an-johin'i Odolama, ary ny tobin'ny Filistina tamin'izay dia tafaorina tao amin'ny lohasahan'i Refaima. 16Tao amin'ny trano mimanda Davida tamin'izay ary nisy antoko-miaramilan'ny Filistina tany Betleema. 17Nanam-paniriana Davida ka nanao hoe: Iza no mba hampisotro ahy rano avy amin'ny famorian-drano eo am-bavahadin'i Betleema? 18Niaraka tamin'izay ireo telo lahy ireo dia namakivaky ny tobin'ny Filistina ka nanovo rano teo amin'ny famorian-drano eo am-bavahadin'i Betleema, dia noraisiny sy nentiny nankeo amin'i Davida. Kanjo tsy nety nisotro izany Davida, fa nataony fanatitra araraka ho an'ny Tompo izany, ary hoy izy: 19Sanatria raha hanao izany aho! Ra aman'ain'ireo olona ireo ve, ka dia hosotroiko? Fa ny ainy no nataony vy very, hitondrany an'ity! Dia tsy nety nisotro izy. Izany no nataon'izy telo lahy mahery ireo.
20Abisai, rahalahin'i Joaba lehiben'ny Telo lahy, dia nampandihy ny lefony tamin'ny lehilahy telon-jato, ka nahafaty an'ireo, ka nanan-daza tamin'izy telo lahy. 21Amin'izy telo lahy faharoa, dia izy no malaza indrindra, ka lehiben'izy ireo, nefa tsy nahomby an'irerý telo lahy voalohany izy.
22Banaiasa zanak'i Joiadà zanaky ny lehilahy anankiray mahery sy naneho herim-po lehibe matetika, avy any Kabseela. Izy no namely ireo ariela roalahy avy any Moaba. Indray andro nisy oram-panala izay, dia nidina izy ka namely ilay liona tao amin'ny lavaka famorian-drano. 23Izy no nahafaty ny Ejipsiana anankiray, izay dimy hakiho no halavany, ary nisy lefona sahala amin'ny vodi-tenon'ny mpanenona tao an-tanan'ny Ejipsiana. Nitondra tehina izy nankany aminy ary ny lefona teny an-tanan'ilay Ejipsiana no nosarihiny, dia novonoiny tamin'ny lefony indrindra izay. 24Izany no nataon'i Banaiasa zanak'i Joiada, ka nanan-daza tamin'izy telo lahy mahery izy. 25Nalaza noho izy telopolo lahy, nefa tsy nahomby azy telo lahy izy. Nataon'i Davida isan'ny mpanolo-tsaina azy manokana izy.
26Lehilahy mahery tamin'ny foloalindahy: Asaela rahalahin'i Joaba; Elkanàna, zanak'i Dodao, avy any Betleema; 27Sammota avy any Arorì, Helesa avy any Falona, 28Irà zanak'i Aksesa avy any Tekoe; Abiesera, avy any Anatota; 29Sobokaì, Hosatita; Ilaì, Aholita; 30Maharaì, avy any Netofà; Heleda zanak'i Baanà, ary Netofà; 31Etaì, zanak'i Ribaì avy any Gabaàn'ny taranak'i Benjamina; Banaià avy any Faratona. 32Horaì avy any amin'ny lohasahan'i Gaasa; Abiela avy any Arabà; Azmaveta avy any Baorama; Eliaba avy any Salabona; 33Bene-Asema avy any Gezona; Jonatàna zanak'i Sage avy any Arara; 34Ahiama zanak'i Sakara avy any Arara; 35Elifala zanak'i Ora, 36Hefera avy any Mekerà; 37Ahia avy any Felona; Hesrao avy any Karmela; 38Naaraì zanak'i Asbaì; Joela rahalahin'i Natàna; Mibohara zanak'i Agaraì; 39Seleka, Ammonita; Naaraì, avy any Berota, mpitondra fiadian'i Joaba zanak'i Sarvià; 40Irà, avy any Jetera; Gareba avy any Jetera; 41Oria Heteana; Zabada zanak'i Oholì; 42Adìna, zanak'i Sirà Robenita, lehiben'ny Robenita, ary telo-polo lahy niaraka taminy; 43Hanàna, zanak'i Maakà; Josafata avy any Matana; 44Ozia avy any Astarota; Samà sy Jehiela zanak'i Jotama avy any Aroera; 45Jedihela zanak'i Sarì; Johà, Tosaita, rahalahiny; 46Eliela avy any Mahoma; Jeribaì sy Josaia, zanak'i Elnaema; Jetma, Noabita; Eliela sy Obeda ary Jasiela avy any Masobià. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0117 seconds